[OFFICIAL] dr.fone - okukhethwayo iOS Idatha Isipele nokubuyisela esimweni
dr.fone yamathuluzi - iOS Idatha Isipele nokubuyisela esimweni
Isipele nokubuyisela esimweni iOS Idatha Ujika Nezimo
Okukodwa isipele sonke iOS idivayisi kwikhompyutha yakho.
Vumela ukuhlola kuqala nokubuyisa into kusukela isipele kudivayisi.
Hambisa okufunayo kusukela isipele kukhompyutha yakho.
Ayikho ukulahleka kwedatha kumadivayisi ngesikhathi sokubuyisela.
dr.fone yamathuluzi - iOS Idatha Isipele nokubuyisela esimweni kukuvumela ngokukhetha ubuyisele yini ofuna kusukela iOS / eyisipele.
dr.fone yamathuluzi - iOS Idatha Isipele nokubuyisela esimweni ikuvumela ukuba wenze yonke isipele cishe yonke idatha ku-iPhone yakho ne-iPad, noma ungakwazi ngokukhetha ukuthumela idatha ofuna ukugcina kukhompyutha yakho. Lapho kunesidingo, nawe ungakwazi ukubuyisela ukusekela ngokulondoloza idatha kudivayisi yakho ngokukhetha izinto ofuna. Kuzoba ungumuntu ongcono kuka usebenzisa iTunes noma ICLOUD.
Isipele yakho iPhone / iPad ne One Click
Lonke Into isipele kukuthatha kuphela okukodwa. Uma idivayisi yakho ixhunyiwe futhi itholiwe, uhlelo ngeke idatha ngokuzenzakalelayo isipele ku-iPhone, iPad noma iPod touch yakho. Ifayela entsha yokwenza isipele ngeke isula eyodwa ubudala. Ungenza isipele noma kunini uma ufuna.
Yenza isipele zonke izinhlobo amafayela
iPhone ubuyisele Ujika Easy
Ubuyisele idatha iPhone ngokuchofoza okukodwa ngemva kokuxhuma kudivayisi yakho.
iPhone Backup Amafayela ngeke Emisha
Ungenza iPhone sika isipele nsuku zonke futhi wonke amafayela isipele bayasindiswa futhi ngeke sithathelwe indawo abasha.
Buka kuqala iPhone Isipele sokuqukethwe
Ungahlola kuqala imininingwane zonke iPhone isipele amafayela akho nale isipele iOS kanye ukubuyisela uhlelo, ukuze ukwazi ukuphatha iPhone zakho zokulondoloza kahle.
iPhone Buyisela Ngeke Icishe idatha yakho
Ngemva kokuhlola kuqala, ungakhetha kwanoma iyiphi into isipele iPhone yakho ukuze ulibuyise iPhone yakho noma i-iPad. Ngeke indawo yayo yonke imininingo ekhona kudivayisi yakho.
Hambisa iPhone yakho Data
Uma ufuna ukufunda noma uzitholele idatha yakho, futhi ungakwazi ukuthekelisa izinto e-iPhone yakho eyisipele njengoba ifayela le-HTML noma abanye ukuthi ufuna. Kuphuma kuwe.
Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa i-zakamuva iPhone 7 Plus, i-iPad Pro, noma i-iPhone endala 4, iPad 1, lesi-iOS alulame idatha kuyahambisana ngokugcwele wonke amamodeli we-iPhone, i-iPad ne-iPod touch.
Lokhu isipele iOS kanye ukubuyisela hlelo ukufunda kuphela ngokuphelele software. Ngeke ugcine, shintsha noma avuze noma iyiphi idatha kudivayisi yakho noma ifayela yokusekelayo. Sithatha idatha yakho siqu futhi akhawunti sina. Uneminyaka njalo kuphela umuntu ongakwazi ukuyifinyelela.
Thumela idatha kusuka Backup Amafayela
Njengoba amafayela isipele, ungakhetha ukuba abagcine bonke noma susa noma ukuthi awunayo isidingo. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuhlola kuqala bese ukuthekelisa noma yiziphi izinto kusukela ifayela yokusekelayo kukhompyutha yakho, bese uyawagcina njenge-HTML, CSV noma ye-vCard amafayela.
Ubuyisele idatha ku-iOS amadivayisi wakho kalula.
iOS Idatha Isipele nokubuyisela esimweni Imisebenzi Yabo Bonke iOS Amadivayisi
Hambisa oxhumana nabo kanye imiyalezo kwikhompyutha njenge-.csv, .html, noma vcard;
imiyalezo Export Whatsapp kwikhompyutha njengoba csv noma .html;
Export yerekhodi lwamakholi, amanothi, ikhalenda, izikhumbuzi ibhukumaka Safari sika kwikhompyutha njengoba .html.
3 Izindlela Amanothi Backup on iPhone and iPad
Yini iTunes Backup?
Indlela Buyisela WhatsApp Backup ku-iPhone and Android Amadivayisi
Izindlela ezimbili Isipele iCloud Oxhumana
Indlela Isipele Idatha Locked iPhone 7 (Plus) / SE / 6s (Plus) / 6
Indlela Buyisela kusuka ku-iTunes Backup
iPhone Isipele extractor: Khiphela futhi Phinda iPhone Data
4 Izindlela Isipele iPhone Oxhumana ne / ngaphandle iTunes
Indlela Yokuthola iPhone Isipele kwendawo Susa Izipele
Phinda oxhumana elahlekile noma ususiwe, imiyalezo, izithombe, amanothi, njll kusuka ku-iPhone, i-iPad ne-iPod touch.